Fomba fandefasana - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > Fomba fandefasana
Azontsika atao ny manolotra serivisy fanaterana an-tserasera maneran-tany, toa an'i DHLor FedEx na TNT na UPS na EMS / Air Mail hafa ho an'ny fandefasana entana.
* Ny vidin'ny vidiny dia ny DHL. Ny antsipiriany antsipiriany, azafady mba hifandraisa aminay. Samihafa ny firenena samy hafa ny fiampangana.
* Noho ny baikon'ny IC, mihoatra ny USD1000.00 ao anatin'ny 1KG, afaka manohana ny fandefasana maimaimpoana amin'ny DHL / FedEx izahay.
Azontsika atao ihany koa ny manolotra EMS ho an'ny fandefasana. Kely noho ny Expressdelivery, fa ny fotoana fitarihana dia lava noho ny express. Ilaina ny 3-10 andro any amin'ny ankamaroan'ny firenena.
Momba ny fiampangana EMS, azafady mba mifandraisa aminay. Ny EMS dia manana fomba iray hafa -China Post (Air Mail), ny vidiny dia mora vidy kokoa, 0.5KG = USD12.00, Tarika timemore noho 2Weeks.
Fomba mahazatra dia tsy manoro hevitra ny fampiasana EMS izahay, manoro hevitra izahay ny hampiasa tsara kokoa DHL / FedEx / TNT / UPSwill, haingana indrindra ary azo antoka ho an'ny entana izany.
Fomba fandefasana hafa
SF Express ho an'i Azia; Chang-woo tsipika manokana ho an'ny Korea, Aramexfor firenena Afovoany Atsinanana. Ny hafa fomba hafa fandefasana, azafady mba hifandraisa aminay.
Azontsika atao ihany koa ny mandefa ny entana ho any amin'ny mpizara anao na amin'ny olon-kafa an-tsokosoko, mba hahafahanao mandefa ny entana. Izy io dia mety hamonjy fitaterana entana ho anao, na mety mety kokoa aminao.
Shippinginformation, ilainay ny mombamomba ny fandefasana ao anatin'izany ny anarana momba ny orinasa mpampiasa (na an'ny tena manokana), ny anarana mpandray, laharana fifandraisana, ny adiresy ary ny paositra. Azafady alefaso azafady ireo fanazavana ireo aminay, mba hahafahantsika mandamina haingana ny fandefasana azy.
Adidy sy hetra
Ny baiko mandahatra, ny hetra rehetra ao an-toerana, adidy, GST, tarif ary feessh ho andraikitry ny mpanjifa (andraikitrao). Vokatry ny fahasarotan'ny fandefasana ny tsy ara-potoana, tsy afaka manome tombam-bidy sy sombiny amin'ireto vola ireto izahay. Momba ny lanjan'ny hasina momba ny fonosana, faly izahay manaraka ny fanirianao, manantenà ny hifandray aminay.